Vsmile Acetal Resin-Akụkọ-VSmile Co., ltd
Vsmile Acetal mmiri
Oge: 2021-07-02 ikwu:19
Nke a bụ Q&A na ihe niile ịchọrọ ịma banyere Acetal cos dentists na-esiwanye prescribing metal-free, nke mbughari ele mmadụ anya n'ihu dentures tụbọchị.
Gịnị bụ Umuoji?
Vsmile Acetal bụ thermoplastic millable nke na-enye ndị na-ahụ maka ezé na ndị dọkịta eze ihe dijitalụ nke dabara adaba maka ngwa ngwa dịgasị iche iche. Ihe acetal copolymer a na-ekpochapu nke ukwuu na-enwe ike dị elu na ike mgbanwe, ike ọgwụgwụ, ike esemokwu, obere iru mmiri, na nkwụsi ike dị ukwuu.
Kedu ihe bụ uru nke eze na-ewepụ ewepụ sitere na Acetal?
Acetal na-eme ka estetik, dịgide adịgide, ezé na-enweghị ezé na-ebugharị eze. Onye ọrịa ahụ ga-enwe obi ụtọ maka nkasi obi, ịdị mfe nke ịtinye na iwepu, enweghị ụtọ ọla, na enweghị nrụpụta ọkụ mgbe ị na-a coldụ mmanya ma ọ bụ ihe ọ hotụ hotụ na-ekpo ọkụ.
Olee otú ike bụ Acetal?
Vsmile Acetal nwere ike mgbanwe nke 85 MPa.
Kedu ka Acetal mbughari ele mmadụ anya n'ihu denture dị iche iche site na nke ka nke ígwè?
Na esemokwu na Acental mbughari ele mmadụ anya n'ihu dentures na-ọzọ mgbanwe karịa metal kọntaktị, n'ihi ya, ha nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-ekere ndị undercuts. Nke a na-enye ohere maka ntakịrị ntakịrị mwakpo ikpe ahụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa iwepụ usoro ahụike dị mma iji mepụta preps ezumike.
Ndi Acetal discolor na oge?
Acetal na-amịkọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri, yabụ na-enye ọtụtụ afọ ọrụ na-enweghị ịchọgharị ma ọ bụ mepee isi ísì.
Olee otú mwute bụ Acetal na okpomọkụ?
Ihe akụrụngwa na-agbaze na 392 ,F, yabụ dị ezigbo jụụ na ogo ọkụ nkịtị.
Okpokoro Acetal ọ nwere ike idozi ya?
The ihe onwunwe bụ mfe na cleanly otu na otu carbide burs na-eji gbanwee eze ezé resin.
nwere ike Okpu acetal ka a gbanwere?
Obere mmeghari anya na nkpachi nwere ike ime oche site na iji ikuku di oku kpoo ha oku (oku ga-agba ha oku) ma obu jiri ihe eji eme oku.
Ndi Acetal mbughari ele mmadụ anya n'ihu ezé kpuchie ezumike?
Ejirila ihe ahụ rụọ ọrụ nke ọma na ọnụ n'ụwa niile maka afọ 25. N'ime oge ahụ, mmebi a na-akọ na-adịkarị obere, mana ngwa ọ bụla nwere ike iwepu nwere ike ịdabere na ọdịda dabere na njikwa, wdg.
Enwere m ike ịrụkwa Acetal mbughari ele mmadụ anya n'ihu denture etiti ma ọ bụ mgbachi ma ọ bụrụ na ọ na-agbaji?
Laboratorylọ nyocha gị nwere akụrụngwa na ọzụzụ dị mkpa iji mee ngwa ngwa na ngwa ngwa ịme obere mmezi na-enweghị ike ịmepụta ngwa ọhụrụ.
Kedu otu ihe na-eguzogide ọgwụ bụ ọkọ?
Onye ọrịa kwesịrị izere nhicha plastik na ahịhịa abrasive siri ike ma ọ bụ nke siri ike. Ọ bụla n'elu counter denture cleanser ga-adị mma ma dị irè.
Ihe ahụ ọ ga-agbaze?
Ndi Acetal na-eguzogide nje?
Enweghi ike ikwu na nkwupụta ahụ; nke na-eme ka ọ ghọọ ọgwụ ma ọ bụ mgbochi nje.
Kedu ka m ga - esi edozi ma mee ka ọ dị Acetal etiti?
Enwere ike ịmecha ya na paịlị na wiil.
Daalụ maka ịgụ ihe!
PREV: Na-emegharị Zirconia
OSOTE : Sintering Ọkụ Mmezi
Vsmile Dental Abutment ịkụbanye sikruuokwomoto Set
Vsmile Milling Burs Roland ® at Kwekọrọ n'Ozizi
Vsmile Milling Burs Sirona ® MC X5 dakọtara